Mgbe mmeri Trump, China nwere ike iduzi nkwekọrịta Paris | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe mmeri Trump, China nwere ike iduga nkwekọrịta Paris
Dị ka anyị niile mara, Donald opi a họpụtara ya ịbụ onye isi ala nke United States. Ozi ọjọọ maka gburugburu ebe obibi bụ na maka mgbanwe mgbanwe ihu igwe adịghị, ya mere, ọ na-ezube iwepu US Nkwekọrịta Paris.
United States bụ mba nke abụọ na-ewepụta ikuku ikuku kachasi na ikuku. Ọbịbịa Donald Trump nọ n'ọkwa onye isi ala akpatala nzuzu nzuko ihu igwe (COP22) na Marrakech. Ma, ọtụtụ mba ekwusila nkwado ha na ọgụ megide mgbanwe ihu igwe. Ugbu a ọ bụ China, mba na-ewepụta ikuku ikuku kacha dị na ikuku, dị njikere ịkwado nkwekọrịta ihu igwe.
China na-ezube ịga n'ihu n'echiche ya nke ịme mgbanwe ume na akụ na ụba obere carbon. Mmetọ ikuku na China bụ nnukwu nsogbu dịịrị ụmụ amaala. Nnukwu mmetọ ikuku site na ụlọ ọrụ kol na-egosi na ọtụtụ ụmụ amaala enweghị ike ịpụ na-enweghị mkpuchi. Na mgbakwunye, ọtụtụ mmadụ na-ata ahụhụ ma na-anwụ site na ọrịa iku ume.
Otu onye nnọchi anya ndị nnọchi anya ndị China kwuru na mgbanwe ike nke China nwere bụ mmegharị a na-enweghị ike ịkwụsị nakwa na ebe ọchịchị ọhụrụ dị na United States na ha agaghị akwụsị. Mkpebi ahụ siri ike na agbanyeghị na onye isi ala US ekwenyeghị ma ọ bụ chọọ isonye na ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, China agaghị alaghachi azụ. Mgbalị nke ndị obodo China ga-aga n'ihu na-eto.
Mmeri ntuli aka nke Trump bụ nnukwu osisi maka nzukọ ihu igwe emere na Marrakech ebe ihe dị ka mba 200 ha na-ekwenye na iwu nke abanye na nkwekọrịta Paris n'oge na-adịbeghị anya ga-agbaso. Echetara ya na nchegbu, n’oge gara aga, ọpụpụ nke George Bush nke usoro iwu Kyoto gbara mba ndị ọzọ mepere emepe ume ka ha ghara ịga n'ihu na nkwekọrịta ihu igwe. Ha na-atụ ụjọ na ebumnuche Trump ga-enwe otu ihe ahụ.
Onye isi ala ọhụrụ nke United States na mgbanwe ihu igwe
Donald Trump egosipụtalarị n'ọtụtụ oge, ma na nhọpụta ya na ugbu a na onye isi oche ya, mgbanwe ihu igwe Ọ bụ aghụghọ nke ndị China mepụtara iji mee ka asọmpi ha. N'okwu ya, o kwere nkwa na ọ bụrụ na onye isi ala, ọ ga-akagbu nkwenye nke Agreement Paris ma wepu ego na mmemme UN na mmemme niile metụtara mgbanwe ihu igwe.
O kwuworị na, n'ime ụzọ iri mbụ ọ ga-erute na White House, otu n'ime ha ga-abụ kagbuo ugwo na mmemme metụtara mgbanwe ihu igwe. Nke a bụ nnukwu nsogbu maka ihu igwe, na-eche na US bụ mba nke abụọ na-ahụ maka nsị zuru ụwa ọnụ. Ọ ga-abụkwa ihe jọgburu onwe ya maka mba ndị ahụ na-emepe emepe chọrọ itinye aka na Nkwekọrịta Paris, ebe ha na-emepe emepe na teknụzụ na-enweghị mbibi ihu igwe. Nke a bụ n'ihi na United States yana EU bụ otu n'ime ndị na-enye onyinye kachasị ukwuu maka ego ihu igwe. Na ego mmefu ego a kọwara ya ihe dị ka $ 3.000 ijeri mere ruo 2020. Ruo ugbu a, Obama akwụla naanị nde euro 500 nke ngụkọta.
Mba niile nke kwadoro nkwekọrịta Paris na-echere iji hụ ma Trump mechara mee mkpebi iwepụ ego ma ọ bụ gbanwee etu o si achịkwa ndị omebe iwu ya. Ebumnuche nke mba niile bụ na mbọ na atumatu akwadoro nwere mmetụta zuru ụwa ọnụ ma bụrụ ihe atụ maka mba ndị na-akwadobeghi ya.
Onye isi oche nke COP22, Salahedín Mezuar, ekwuola ihe a:
"Nkwekọrịta Paris agaghị akwụsị ịrụ ọrụ n'ihi na otu n'ime ndị ọzọ na-apụ, mba ndị ọzọ dị ebe a iji hụ na ọ ga-aga n'ihu ma anyị kwenyesiri ike na ụmụ amaala America kwenyesiri ike na ọgụ a megide nsogbu kachasị. na-eche ihu na ndi mmadu "
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbe mmeri Trump, China nwere ike iduga nkwekọrịta Paris
Vingga maka ihu igwe ugbu a: egwuregwu dị ka ọgụ megide mgbanwe ihu igwe
Gịnị bụ thermal njupụta?